Doorashooyinka Britain oo Meel Wanaagsan Maraya iyo Natiijooyinka Hordhaca ah – Radio Daljir
Doorashooyinka Britain oo Meel Wanaagsan Maraya iyo Natiijooyinka Hordhaca ah
Juunyo 9, 2017 4:55 b 0
Doorashadii guud ee ka dhacaysay dalka Britain ayaa maraysa meel xasaasi ah kadib markii tirinta codadka ka bilaabatay dhamaan goobihii lageeyay sanduuqyadii lagu dhiibanayay Cod bixinta.
Warar hordhac ah oo la sheegay in ay tahay Ra’yi uruurin laga sameeyay Dalkaasi ayaa sheegaya in xisbiga ay hogaamiso ra’iisul wasaare Theresa May ay lumin doonaan aqlabiyada aqalka barlamaanka ee Britain.
Sidoo kale Xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalkaasi ayaana lagu wadaa inuu helo sodon iyo afar xilibaan oo dheeri ah iyo ka badan inkastoo ay adagtahay in kuraas badan la sadaaliyo maadamaa ay adagtahay doorashadaan ka dhacaysa dalkaasi .
Doorahada ka dhacayso Dalka Britain ayaa waxaa isku diiwaan-galiyay 47 milyan oo qof oo cod-bixiyayaal ah kuwaasoo u dareeray sanaadiiqda codbixinta oo gaaraya 40’000 oo sanduuq si ay u doortaan cidda hogaamin doonta dalkaaas madaama ra’iiusl Wasaaraha Britain, Thersa May ee bil iyo 3 todobaad ka hor ku dhawaaqday doorashada oo xiligeedii laga soo hormariyay.
Xukuumadda Puntland oo Ku Dhaaratay Dagaal Ka Dhan ah Alshabaab